Nanavotra Olona Tany Akaikin’i Paris ny Mpamono Afo Iray
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Basque Bichlamar Bicol Catalan Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kabyle Kannada Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Krio Kroaty Letonianina Litoanianina Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mingrelian Myama Nahuatl (Afovoany) Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Oromo Ourdou Pendjabi Persianina Poloney Portogey Portogey (Portogaly) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tahisianina Tajiki Tarasque Tigrigna Tiorka Tlapanèque Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Télougou Umbundu Valencienne Vezo Xhosa Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Éwé
Nanavotra Olona Ilay Mpamono Afo na dia Tsy Andro Fiasany Aza
Nandeha bisy hanatrika fivoriamben’ny Vavolombelon’i Jehovah any akaikin’i Paris, any Frantsa, i Serge Gerardin, tamin’ny 5 Janoary 2014. Nahita lozam-piarakodia nahatsiravina izy. Hoy izy: “Nandona ny tongotry ny tetezana anankiray ilay fiara, dia nisavoana. Avy eo ilay izy nidona tamin’ilay tetezana, dia nirehitra ary nivadika ambony ambany.”
Efa 40 taona mahery i Serge no mpamono afo. Mpitarika ekipa mpamono afo izy, ka zatra manao zavatra avy hatrany. Hoy izy: “Nasaiko najanon’ilay saofera ny fiaranay, na dia teny ampitan’ilay lalambe aza izahay. Nihazakazaka nankeny amin’ilay fiara nirehitra aho avy eo.” Naheno olona niantso vonjy i Serge. Hoy izy: “Nanao kompile sy kravaty aho sady tsy nitondra fitaovana miaro amin’ny loza. Misy olona mbola tokony havotana anefa ao matoa misy miantso vonjy.”
Nahita mpandeha iray i Serge rehefa nihodidina an’ilay fiara. Mbola tsy tonga saina tsara izy io, ka nentiny teny amin’ny toerana azo antoka kokoa. Hoy i Serge: “Hozy izy hoe mbola misy olona roa ao anatiny ao. Efa betsaka ny fiara nijanona tamin’izay, fa tsy nisy olona afaka nanatona satria niredareda be ny afo.”
Nisy mpitondra kamiao vitsivitsy tonga avy eo, nitondra fitaovana famonoana afo. Nasain’i Serge notifirin’izy ireo tamin’ireny ilay fiara, ka maty ny afo nefa tsy maty tanteraka. Tavela tao ambanin’ilay fiara ilay saofera. Ningain’i Serge sy ny olon-kafa teo àry ilay fiara ary nesorin’izy ireo tao izy.
Hoy i Serge: “Nanomboka nirehitra indray ny afo tamin’izay.” Mbola nisy mpandeha iray nihantona tamin’ny fehikibo fiarovana amin’ny loza anefa tavela tao. Nisy mpamono afo hafa tonga avy eo ary nanao akanjo fanaovan’ny mpitondra môtô izy. Tsy niasa koa izy tamin’io andro io. Hoy i Serge: “Noteneniko ry zareo hoe efa hipoaka ilay fiara. Noraisinay tamin’ny sandriny ilay olona ary navoakanay tao.” Tsy ampy iray minitra taorian’izay dia nipoaka ilay fiara.
Tonga avy eo ny mpamono afo sy ny mpitsabo mba hikarakara an’ireo niharan-doza sy hamono an’ilay afo. Nahazo fitsaboana vonjimaika i Serge satria naratra sy may ny tanany. Rehefa tao anatin’ilay bisy handehanany any amin’ilay fivoriambe izy, dia be dia be no nihazakazaka hisaotra azy.
Tena faly i Serge satria afaka nanavotra olona. Hoy izy: “Tsapako hoe manana adidy amin’i Jehovah Andriamanitro aho. Tena afa-po aho fa afaka nanao izay vitako mba hanavotana an’ireo olona ireo.”